Njikwa ogo - Ụlọ ọrụ UZ Technology (Shenzhen).
Ogo bụ ntọala nke mmepe ụlọ ọrụ, kedu ka anyị si ejikwa ogo ngwaahịa anyị?
Anyị nwere usoro mmesi obi ike na usoro ọzụzụ zuru oke iji hụ na njikwa mma sitere na ndụ niile nke ngwaahịa.Ụlọ ọrụ anyị edepụtawo n'ụzọ doro anya isi ihe nke njikwa mma site na mmalite nke mmepụta ngwaahịa.Wepụ ihe mgbagwoju anya iji mee ka ọ dị mfe, wepụ àgwà ọma ndị a na-emepụta na nhazi ahụ, ma lekwasị anya na nsogbu dị mma na teknụzụ ndị bụ isi na njikọ ọ bụla ma nọgide na-edozi ha.
Ngalaba na-emesi obi ike nke R&D center bụ ihe mgbochi mbụ nke njikwa mma, yana ụlọ nyocha nke nọ n'okpuru ya bụ ngalaba bụ isi iji hụ na “enweghị ntụpọ efu na mmepe”.Ngalaba njikwa mma na mmepụta bụ ngalaba dị mkpa maka mmesi obi ike njedebe anyị.Ụlọ nyocha ya maka ịdị mma bụ onye na-ekpebi ma ngwaahịa a na-ekesa ma ọ bụ na ọ bụghị.Ndị na-enyocha mma na saịtị na-agbaso ụzọ nyocha zuru oke iji hụ na ngwaahịa anyị dị mma.
Onye ọrụ ga-ebu ụzọ mụọ ngwá ọrụ ya ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ịrụ ọrụ ya nke ọma.Nke a bụ ilu China ochie.N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, nkwalite akụrụngwa mmepụta anyị na-adịwanye ọhụrụ ma dị mma.Omume egosila na iwebata ngwá ọrụ dị elu amụbawo mmepụta mmepụta ihe ma mee ka mkpụrụ nke ngwaahịa dịkwuo mma.Nke a karịrị ike mmadụ naanị.Enwere ike ịkọwa ya dị ka 2.0 nkwalite cognition na usoro maka mma mma.
Wepu nsogbu na usoro mmepe
Mmụọ na-egbu maramara siri ike na-etinye nnukwu ihe achọrọ na nyocha na mmepe.Ndị mmadụ UZSPACE kwenyere n'otu n'otu na iwepụ nsogbu na mmepe bụ mmetụta kachasị mma maka ịchekwa ọnụ ahịa, ịba ụba nke ọma na ịkwalite mkpụrụ.Ya mere, ọ ga-akara anyị mma ịgbatị oge R&D iji kpochapụ ọtụtụ nsogbu gụnyere ịdị mma n'oge a.